Crocus | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Ụdị crocuses kachasị adịkarị
E nwere ike ịchọrọ crocuses n'enweghị ihe ọ bụla a na-akpọ ndị na-akpagbu mmiri, ọ bụ ezie na e nwere ụdị ndị na-eto eto na ọdịda. Ha sitere na ezinụlọ iris na ha bụ obere osisi bulbous na agba dị iche iche nke okooko osisi. Taa, ihe dị ka narị atọ ụdị osisi a.
Nzuzo nke kụrụ na crocuses na-eto eto n'ụlọ
N'oge oyi, nro primroses nwere ike ịmepụta ihu igwe n'ime ụlọ ahụ. Iji usoro pụrụ iche, ị nwere ike ịmepụta okooko ha n'otu oge, dịka ọmụmaatụ, na New Year. Crocuses bụ naanị osisi ndị dị otú ahụ, ma ịkụ na ilekọta ha n'ụlọ chọrọ ụfọdụ ihe ọmụma na mgbalị.
Ghaa osisi na ilekọta crocuses n'ụzọ ziri ezi
Osisi okooko osisi mara mma dị egwu bụ crocuses. Ha na-amalite oge ntoju na mmalite oge opupu ihe ubi ma jiri agba ha na-atọ ndị ọzọ ụtọ ruo ụbọchị iri. Mgbe okooko osisi ahụ dajụrụ, petals ka bụ ihe na-atọ ụtọ na nke ọhụrụ, ma site na etiti June, oge ha ga-abịa. Ọzọkwa, crocus abịa oge ezumike. N'isiokwu a anyị ga-agwa ihe niile ị nwere ike inwe mmasị banyere crocuses.
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Crocus